Mutt, mpanjifa mailaka CLI tena tsara | Avy amin'ny Linux
Mutt, mpanjifa mailaka CLI tena tsara
Raha iray amin'ireo mpitia terminal ianao ary avy amin'ny fampiharana CLI, avelao aho hiteny aminao izany angamba Mutt dia fangatahana sitrakao.
Mutt dia mpanjifa mailaka CLI (Andalana baiko) ho an'ny rafitra Unix-like. Izy io dia nosoratan'i Michael Elkins tamin'ny 1995 ary navoaka tamin'ny alàlan'ny Lisansa GNU General Public. Tamin'ny voalohany dia nitovy tamin'ny elm, ankehitriny ny programa dia tena mitovy amin'ny mpamaky ny vaovao slrn.
1 Momba ny Mutt
2 Momba ny kinova Mutt 2.0 vaovao
Momba ny Mutt
Mutt manohana ny ankamaroan'ny endrika mailaka (indrindra ny mbox sy Maildir) ary ny protokol (POP3, IMAP, sns.) Anisan'izany ny fanohanana MIME, indrindra ny PGP / GPG sy S / MIME.
Mutt dia mpampiasa mpampiasa mail (MUA na Mail User Agent) ary tsy afaka mandefa mailaka mitokana. Izany dia mitaky anao hifandray amin'ny mail transfer agents (MTA), mampiasa, ohatra, ny Unix sendmail interface.
Vao tsy ela akory izay no nanampy ny fanampiana SMTP. Miankina amin'ny fitaovana ivelany amin'ny famoronana sy fanivanana hafatra ihany koa izy io. Ao amin'ny kinova vaovao Mutt dia afaka mampiasa ny smtp url variables fandefasana mailaka avy any Mutt.
Tena azo alamina izany:
Izy io dia manana torolàlana an-jatony amin'ny fametrahana sy fanaingoana ny baiko.
Io dia ahafahanao manova ny lakile rehetra ary manamboatra makrô fitendry ho an'ny hetsika sarotra, ary koa ny loko sy ny fisehon'ny ankamaroan'ny interface.
Amin'ny alàlan'ny fiovan'ny foto-kevitra fantatra amin'ny anarana hoe "hooks" dia azo ovaina ny maro amin'ireo toe-javatra arakaraka ny masonkarena toy ny boaty mailaka ankehitriny na ireo mpandray hafatra mivoaka.
Betsaka ny patch sy ny extensions misy izay manampy fampandehanana, toy ny fanohanana NNTP na sidebar mitovy amin'ny matetika hita amin'ny mpanjifa mailaka sary.
Voafehy tanteraka amin'ny fitendry i Mutt, ary manana fanohanana ireo kofehy mailaka izy, izany hoe afaka mamaky mora foana amin'ny fifanakalozan-kevitra lava, toy ny amin'ny lisitry ny mailaka. Ny hafatra vaovao dia noforonina tamina mpanonta lahatsoratra ivelany amin'ny alàlan'ny default, tsy toy ny kesika izay mampiditra ny tonian-dahatsoratra fantatra amin'ny anarana hoe pico (na dia azo alamina aza ny fametrahana pine ho an'ny tonian-dahatsoratra ivelany).
Momba ny kinova Mutt 2.0 vaovao
Amin'izao fotoana izao, ny mpanjifa mailaka Izy io dia ao amin'ny kinova Mutt 2.0 ary izay navoaka vao tsy ela akory izay.
Fanavaozana isa isa zava-dehibe vaovao dia noho ny fiovana izay manapaka ny fifanarahana mihemotra izy ireo.
Ohatra, ny fihetsika rehefa mametaka rakitra amina lampiranana dia niova, aryNy maody default dia $ ssl_force_tls, ny fanadiovana lohan-doha kilemaina rehefa manao decode-copie sy decode-save operasi, ny masontsivana $ hostname dia napetraka aorian'ny fanodinana muttrc sy ireo safidy "-e" eo amin'ny tsipika baiko.
Anisan'ireo zava-baovao misongadina ao amin'ny kinova vaovao:
Fahaizana mamaritra adiresy IPv6 fa tsy anaran'ny mpampiantrano ao amin'ny mailaka, ohatra, "mpampiasa @ [IPv6: fcXX:….]".
ihany koa nanampy baiko "cd" hanova ny lahatahiry miasa, ary koa sary nanampy fanampiana ho an'ny XOAUTH2 (Fanamarinana IMAP, POP ary SMTP mampiasa OAuth), izay ampandehanana amin'ny alàlan'ny fametrahana ny masontsivana "xoauth2" ao amin'ny $ imap_authenticators, $ smtp_authenticators ary $ pop_authenticators $.
ihany koa fifandraisana indray mandeha ho azy ho an'ny IMAP nomena raha toa ka tsy nahomby ny fifandraisana (raikitra ny olana amin'ny fahaverezan'ny fanovana tsy voasoratra anarana noho ny tsy fahombiazana).
Rehefa mampiditra modifier modely ianao aorian'ny toetranao "~" dia azonao atao izao ny manindry Tab raha hijery ny lisitry ny mpanova misy.
MuttLisp dia nampiana mba hamela ny fomba fitenenana toy ny Lisp ao anaty fisie fikirakirana. Ohatra:
Nanampy ny fiovaovan'ny $ cursor_overlay izay azo ampiasaina hitehirizana ireo tondro loko ho an'ireo tsipika tondroin'ny cursor. Ohatra, rehefa manamboatra ireto toe-javatra manaraka ireto dia hositranina mena ny tsipika misy tsipika misy hafatra vaovao.
Niovaova $ Attach_save_dir miovaova raha hamaritana ny lahatahiry hitahiry ireo miraikitra.
Ary farany, raha te hahalala bebe kokoa momba izany ianao dia azonao atao ny manamarina ireo andinindininy ao amin'ny rohy manaraka
Mikasika ny fametrahana azy dia azonao atao ny mahita ny kaody loharano ary koa ny mombamomba ny fonosana, ato amin'ity rohy ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Mutt, mpanjifa mailaka CLI tena tsara
Ny kinova RansomEXX ho an'ny Linux dia voamarika